ALERT !!: HowarJran အက်ပ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ အမှိုက်မရှိဘူး !! | Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube channel မှကျွန်ုပ်တို့သည် Weather Forecast PRO application ကိုသုံးစွဲသူများစွာကအကြံပြုခဲ့ပြီးနောက်၎င်းသည် malware ပါ ၀ င်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Virtus Total မှစစ်ဆေးပါ ကျနော်တို့ထုတ်ဝေ ကံမကောင်းတာကကံမကောင်းတာက malware ရဲ့အသိုက်ဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ပြလိုက်တဲ့ဗွီဒီယိုအသစ်။
ထိုဆောင်းပါး၌ပင်ငါမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည် သီးခြားဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့မသိခဲ့ဘူး ဤ developer ၏ HowarJran ၏ application အားလုံးတွင်တူညီသော malware အမျိုးအစားပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Paco သည်ဤ developer အား Play Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့် application အချို့ကိုကူးယူပြီး၎င်းတို့မှဖြတ်သန်းသွားသည် စုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်စ်
Play Store တွင်ရရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးသော application များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် Chrome အတွက် APK Downloader extension ကို အသုံးပြု၍ Windows 10 ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် Virus Total ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး application အချို့တင်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာ Virus Total သည်လျှောက်လွှာကိုမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမီနောက်ဆုံးလျှောက်လွှာ၏ရလဒ်ကိုဖော်ပြသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, eရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအန္တရာယ်များအရေအတွက်မှာနည်းပါးသည် Play Store တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ် version တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်း၏အက်ပလီကေးရှင်းစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတင်းကျပ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဓိပ္ပာယ်သိပ်မရှိလှသော်လည်းဂူးဂဲလ်သည် Play စတိုးသို့တင်ချင်သော application များအတွက်လုပ်ဆောင်သည်။ အဲဒါကံဆိုးတာပဲကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေသော malware, virus သို့မဟုတ် Trojans အမျိုးအစားများပါ ၀ င်သော application များနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ပြနေသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ဤဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏ application တစ်ခုခုရှိပါက၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးသောအခါ၊ တစ်မိနစ်ထက်ပိုကြာလိမ့်မည်မှာသေချာသည် သူတို့ကို uninstall။ ဤ developer မှဂူးဂဲလ်၏မပျော့ပျောင်းမှုနှင့်မကောင်းသောအလေ့အကျင့်များကြောင့်အခြားအသုံးပြုသူများကိုမထိခိုက်စေရန်တားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာအကောင်းဆုံးမှာအက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်အက်ပ်ကိုအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ALERT !!: HowarJran အက်ပ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ အမှိုက်မရှိဘူး !!
WhatsApp ၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်မှောင်မိုက်သည့်လက္ခဏာ၏လက္ခဏာများတွင် "From Facebook" ကိုတွေ့ရသည်
Call of Duty: Mobile သည်ဒေါင်းလုပ်သန်း ၁၅၀ ကျော်ကျော်ရန်ရှိသည်